သူကငါ့ကိုကြည့်ပြီးငါ့ကိုပြုံးပြတဲ့အခါဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ - အမျိုးသားများအတွက်သိကောင်းစရာများ | စတိုင်ကျသောအမျိုးသားများ
Alicia tomero | | စုံတွဲနှင့်လိင်
ဒီမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့အဲဒီအခိုက်အတန့်တွေမှာမင်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့တာမဟုတ်ဘူး သူမကမင်းကိုကြည့်ပြီးမင်းကိုပြုံးပြတယ်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အခိုက်အတန့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ ထိုအမူအရာကိုသင်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းမရှိပေ။ စစ်မှန်တဲ့အရာကသူမကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ ဆက်သွယ်မှုတစ်မျိုးမျိုးလိုချင်သည်.
လက်ဟန်ခြေဟန်ဖြင့်နောက်ဆုတ်ရန်မလိုအပ်ပေ၊ လူကြီးလူကောင်းပီသရန်နှင့် ရိုးရှင်းသောအမူအရာဖြင့်ပြန်ကြည့်ပါ နည်းနည်းနှုတ်ဆက်သလို ဖြစ်ရင်ပိုသတ္တိရှိလိမ့်မယ် မင်းပိုနီးစပ်လာပြီးကိုယ့်ကိုကိုယ်မိတ်ဆက် ဒါပေမယ့်မင်းကတကယ်သတ္တိရှိတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ရင်ဒါပဲ။ သို့သော်အကြင်နာတရားကိုသုံးခြင်းသည်ဘယ်သောအခါမျှမနာကျင်ပါ။
2 သူကမင်းကိုကြည့်တယ်၊ ပြုံးပြီးသူ့ဆံပင်ကိုထိတယ်
မင်းကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုသတိထားမိပြီးသူကမီးမောင်းထိုးပြတာနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတယ်။ မင်းရဲ့ရုပ်ရည်ကတိုက်ဆိုင်ပြီးအံ့သြသွားနိုင်တယ် သူကမင်းကိုကြည့်တဲ့သူပဲမရ။ ဒါဟာကြည့်ရုံသက်သက်မဟုတ်ဘူး ၎င်းသည်သင့်ကိုလည်းပြုံးစေသည်မရ။ သင်အံ့သြသွားပြီးသင်မည်သို့တုံ့ပြန်ရမည်ကိုမသိနိုင်ပေ။
ထိုအကြည့်နှင့်ထိုအပြုံး၏နောက်တွင်အခြားအမူအရာများပါလာသည်။ သူမမင်းကိုကြည့်ရင်ရော မင်းအဲဒါကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဝေးကိုကြည့်တယ်ဒါဆိုရင်သူကမင်းကိုအရမ်းချစ်တာကိုး။ ဒီအချိန်မှာမင်းစိတ်ဝင်စားရင် သင်ချဉ်းကပ်ပြီးသင့်ကိုယ်သင်မိတ်ဆက်ရမည်၊ သူမသည်သင်နှင့်ဆက်ဆံရေးကောင်း၊ စပ်စုသလားဆိုသည်ကိုသင်သိရန်လိုသည်။
အဲဒီကောင်မလေးကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ သူကမင်းကိုကြည့်တယ်၊ ပြုံးပြီးသူ့ဆံပင်ကိုထိတယ်? သူမသည်သူမ၏အမူအရာများကိုမြှင့်တင်သည်၊ သူမကသင့်ကိုပြုံးပြပြီးမင်းအကြောင်းသူမ၏သိချင်စိတ်ကိုပြောပြီးပြီ။ ဒါ့ပြင်မိန်းမတစ်ယောက်ကသူမကိုအရမ်းဆွဲဆောင်တဲ့အခါသူမဆံပင်ကိုတို့ထိတာကိုနှစ်သက်တယ်၊ ဆိုလိုတာကသူကမင်းကိုလေးစားတယ် မင်းအတွက်ခံစားချက်ရှိတယ်။
၎င်းသည်အဆက်မပြတ်ပြုံး။ တောက်ပနေလျှင်သင့်အားလှုံ့ဆော်ပေးသောလက္ခဏာများစွာရှိသည် သင် လာ၍ သူမကိုစကားပြောနိုင်သည်မရ။ သံသယဖြစ်စရာမလိုဘဲသူကထိုအခိုက်အတန့်ကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေပြီးသူကမင်းကိုကြိုက်ကြောင်းပြတ်သားတဲ့အချက်ပြတာတွေကိုရပ်မပေးပါဘူး။
ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ မင်းကဒီအခွင့်အရေးကိုအမိအရယူရမယ် မင်းကိုကြည့်နေတဲ့ကောင်မလေးကမင်းကိုပြုံးပြရင်ဆွဲဆောင်မှုအကြောင်းငါတို့သေချာပြောနိုင်မလား။ သို့ဆိုလျှင်ယခု ကောင်လေးကဇက်ကိုယူရမယ်စကားပြောပါ၊ ချဉ်းကပ်ပါ၊ ထိုအမျိုးသမီးသည်သင်ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားသည်ဟုခံစားစေပါ။
အဲဒီအကြည့်မှာဖြစ်ပျက်သမျှအသေးစိတ်ကိုရှာကြည့်ပါ။ ကြည့်တဲ့ပုံစံကိုဘယ်လိုတုန့်ပြန်ရမလဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ် ပဟေဋ္ဌိအနည်းငယ်ကိုဖြေရှင်းပါ။ ဒီကောင်မလေးကရှက်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ် မင်းရဲ့အကြည့်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရှုပ်ထွေးနေတယ်။
သူမကသူမကိုငေးကြည့်နေပေမယ့်သူမကိုခဏလောက်ကြည့်ချင်နေသည် သင်၏မျက်နှာကိုလွှဲပါမရ။ အဲဒီကောင်မလေးကပေးနေတာ ရှက်ခြင်းလက္ခဏာများလက်ခံခြင်းမခံရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဤပူပန်မှု၏အဓိပ္ပါယ်အနည်းငယ်ကိုဖန်တီးသောသူများရှိသည်။ သေချာတယ် ငါမင်းကိုသတိထားမိတဲ့အတွက်ငါအရမ်းစူးစမ်းမိခဲ့တယ် မင်းအတွက်ကြည်နူးစရာပါ၊ ဒါပေမယ့်သူကဒီခြေလှမ်းကိုမလျှောက်ဝံ့တာကြောင့်သူကအဲ့ဒီအကြည့်ကိုရှောင်တယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူသူမသည်စွဲလမ်းနေဆဲဖြစ်သည် မင်းရဲ့အကြည့်ကိုမရှောင်ပါနဲ့ သူကမိန်းကလေးဖြစ်လို့ မင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသေချာတယ် ထို့ကြောင့်ထိုအကျိုးစီးပွားကိုထိန်းသိမ်းလိုသည်။ ထို့အပြင်မိန်းကလေးကပြုံးသည်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းသည်သူမ၏ရည်ရွယ်ချက်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ အားလုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ် မျက်လုံးချင်းထက်ပိုလိုချင်သည်။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုပြုံးပြသောအခါသူသည်ကောင်းမွန်သောအရာတစ်ခုကိုဖြစ်စေရန်သူမ၏ရည်ရွယ်ချက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုချသည်။
စကားဝိုင်းတစ်ခုကျင်းပလျှင်သေချာပေါက်ဖြစ်လိမ့်မည် အကြည့်တစ်ချက်ဖြတ်ခြင်းမရ။ မင်းရဲ့ဆွေးနွေးမှုကဘယ်လိုပုံစံပေါ်လာလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးကောင်မလေးကတော်တော်ပြုံးရင်ကောင်းမလား။ ဒါ့အပြင်မှတ်သားပါ သူပြောသောအရာကိုသူမအသေးစိတ်မပျက်လျှင်သူကမင်းကိုစိုက်ကြည့်ပြီးမင်းကိုထိဖို့ရည်ရွယ်ရင်သူကမင်းကိုကြိုက်မှာသေချာတယ်။
စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းစေမယ့်နောက်ထပ်အခိုက်အတန့်ကမင်းသူငယ်ချင်းတွေဒါမှမဟုတ်အသိမိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူရှိနေချိန်။ မင်းသိပ်သိတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကမင်းကိုကြည့်ပြီးစကားဝိုင်းကိုရယ်ရယ်မောမောနဲ့ချည်းသက်သက်ဖြည့်ဖို့ဆိုတာမလွဲမသွေပါပဲ ထိုအပြုံးများနှင့်အသွင်အပြင်များသည်သင့်အတွက်ရည်စူးသည်မရ။ အကြောင်းအရာကရယ်စရာမဟုတ်ရင်တောင်ဆက်လုပ်ပါ မင်းရဲ့အသွင်အပြင်နဲ့အပြုံးတွေကိုဝေမျှပါမရ။ သူကမလွှဲမရှောင်သာသင်နဲ့ပရောပရည်လုပ်နေတာဒါမှမဟုတ်သူကမင်းကိုကြိုက်တာကြောင့်မင်းနဲ့နီးစပ်ဖို့လိုတယ်။
သဲလွန်စများပိုမိုသိလိုလျှင်၎င်းကိုပင်သတိပြုနိုင်သည် မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်နေရာကိုကျူးကျော်ချင်တယ်မရ။ သူမသည်ချဉ်းကပ်၊ မင်းကိုပိတ်စေချင်တယ်၊ သူမမဆုံးချင်တဲ့စကားဝိုင်း၊ တည်တည်ကြည်ကြည်၊ ရယ်ရယ်မောမောနဲ့ပြုံးပြတယ်။ သူကမင်းရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေကိုအမြဲကြည့်နေတာမင်းသတိထားမိလား။ အတိအကျ ဒါဟာမင်းနမ်းချင်တဲ့လက္ခဏာဘဲသင်၏ပါးစပ်သည်အလွန်အာရုံခံစားပုံရသည်။
ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့ဝါသနာကိုဝေမျှချင်တဲ့လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သူတစ်ယောက်ရှိနေတာကြောင့်ဒီလင့်ခ်ကိုရောက်နေပြီဆိုတာသေချာတယ်။ ဤလက္ခဏာအားလုံးသည်တစ်နေရာရာတွင်ပေါ်လာပါကသို့မဟုတ်သင်ပန်းတိုင်ရောက်သည့်နေရာ၌သင်မကြာခဏဖြစ်ပျက်လျှင်သင်ဖြစ်ရမည် ဒီအခွင့်အရေးကိုသေချာအသုံးချပါ။ မင်းဒီထက်အများကြီးဆက်ဖတ်ချင်ရင်မင်းဘာကိုဖတ်နိုင်လဲ။မိန်းမတစ်ယောက်ကမင်းကိုစိုက်ကြည့်တဲ့အခါ "
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » fit » စုံတွဲနှင့်လိင် » သူကငါ့ကိုကြည့်ပြီးငါ့ကိုပြုံးပြတဲ့အခါဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။